Talada ugufiican ee Xeeladaha Suuqgeynta Mawduucyada Millenka ee guuleysta | Martech Zone
Talada ugu Fiican ee Xeeladaha Suuqgeynta Mawduucyada Milyan ee guuleysta
Jimco, Diisambar 7, 2018 Jimco, Diisambar 7, 2018 Stacey Wonder
Waa adduun fiidiyowyo bisad ah, suuqgeyn fayras ah, iyo waxa xiga ee weyn. Iyada oo dhammaan barnaamijyada khadka tooska ah looga helo macaamiisha mustaqbalka, caqabadda ugu weyn ayaa ah sida loo sameeyo ka dhig wax soo saarkaaga mid ku habboon oo aad u jecel suuqa aad bartilmaameedsato.
Haddii suuqaaga bartilmaameedka uu yahay millennials markaa waxaad heysataa shaqo xitaa adag oo dabooleysa baahiyaha jiil saacado ku qaata saacadaha warbaahinta bulshada oo aan la helin farsamooyinka suuq-geynta dhaqameed.
Jiil si dhab ah u og waxa ay rabaan oo aan u degayn wax ka yar waa dad aad u adag oo dad ah. Iyada oo ay taasi jirto, macquul maahan abuur xeelado suuqgeyn wax ku ool ah oo bartilmaameedsanaya millennials, waxay kaliya u baahan tahay qaab cusub oo lagula xiriiro iyaga.
Haddii aad isku dayeyso inaad gaarto millennials waxaa jira waxyaabo yar oo laga iska ilaaliyo haddii aad rabto inaad ku guuleysato olole suuqgeyn ah:
Mawduuc caajis ah
Mawduuc culus oo qoraal ku saleysan
Xayeysiinta TV-ga iyo Wargeysyada
Waxyaabahani waxay caadi ahaan ka leexdaan millennials ka shirkad ama wax soo saar. Ma jecla in loo sheego waxa ay ku iibsanayaan si la mid ah jiilalkii hore ee sida wanaagsan uga soo jawaabey glitz iyo soo jiidashada xayeysiinta meel fiican la dhigay iyo garoonka iibka oo muuqda.
Saddex waxyaalood ayaa muhiim u ah abuuritaanka istiraatiijiyad suuqgeyn wax ku ool ah oo loogu talagalay millennials. Waa inaad: Ka qaybgal, Madadaalo, oo wax baro.
Websaydhyada warbaahinta bulshada sida Instagram, Snapchat, Twitter, iyo Youtube ayaa loo isticmaalaa Barmaamijyadu waxay ku habboon yihiin dhajinta iyo dhiirrigelinta waxyaabaha muuqaal ahaan u muuqda muuqaal la wadaagi karo, uguna muhiimsan, oo lala xiriirin karo.
Recently, Honda wuxuu abuuray olole suuqgeyn guul leh oo loogu talagalay millennials adoo adeegsanaya miirayaasha Instagram iyo taxane SnapChats ah oo loo wadaagay sidii dabka kaynta oo kale. Habka ay u saamaxeen inay u abuuraan nuxur la wadaagi karo oo lala wadaagi karo hab casri ah oo bulsho ahaan la xiriira iyadoon si adag loogu riixin iibka
Wendy wuxuu hayaa akoon firfircoon oo Twitter ah oo had iyo jeer uga jawaab celiya macaamiisha su'aalaha caaqil, fiiqan, iyo qosol xikmad badan. Noocan ah "trolling" waa aasaaska dhaqanka kunka sano ee hadda jira iyo kaqeyb galka bartilmaameedkaaga kunka sano ee ugu macquulsan dariiqan ayaa ah tan ugu fiican ee aad ku guuleysan karto si aad u hesho macaamiisha aadka loo raadinayo.
Mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee abuurista xeelado suuq geyn wax ku ool ah oo guuleystabartilmaameedka millennials-ka waa iyada oo si firfircoon uga hawl gasha baraha bulshada ee ay jecel yihiin adeegsiga. Markaad sidan sameysid waxaad qaadaysaa talaabada ugu horeysa si aad u kordhiso saldhigga macaamiishaada oo aad ula kulanto yoolalkaaga waxqabad iyo saadaashaada faa'iidada.
Fiidiyowyadu waxay noqdeen juggernaut suuq geyn iyo shirkado leh kubixiso malaayiin doolar sanadkii xayeysiinta fiidiyowyada boggaga internetka iyo baraha bulshada. Laakiin halbeeggaaga-kan-waa-maxay-annagu-iyo-kan-waa-kan-waxa-aan iibinno qaabka suuqgeynta fiidiyowga ayaan waxba u qaban doonin si ay u maaweeliyaan macaamiil kun sanadood ah.
Fiidiyowyada fiidiyowga waa a qayb weyn oo ka mid ah suuqgeynta iyo sameynta fiidiyow noqda waxa ugu weyn ee soo socda ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu madadaaliyo laguna soo jiito macaamiishaada millateriyeed. Iyadoo in ka badan 4 saacadood maalintii lagu qaato taleefannadooda, waxaa ammaan ah in la yiraahdo millennials-ka waxay jecel yihiin fiidiyoow wanaagsan. Bisadaha, guuldareysto, qosol, remixes ee sheekooyinka wararka, aqrinta bushimaha xun, waxaad ku sheegtaa way daawadeen.
Shirkado badan sida Old Spice iyo GoDaddy ayaa caan ku ah xayeysiimaha ugu sareeya ee fiidiyoowga ah ee had iyo jeer ku faafa fayraska mahadnaqnimadooda, galmada, qosolka, iyo mararka qaarkood run-run-dhab-aduun-dhab ah.
Mana aha kaliya fiidiyooyin dambe!
Iyo inta video gaagaaban oo qosol badan is hab fiican oo lagu hawlgeliyo bartilmaameedkaaga kun-sano jirka ah, xaqiiqda ayaa ah inaysan ahayn tan habka kaliya. Madadaalada dhagaystayaashaada kun-sanadood waxaa sidoo kale lagu gaari karaa maqaallo gaagaaban oo gaagaaban oo la xiriira waxay aaminsan yihiin, arrimaha bulshada, iyo sheekooyinka dunida dhabta ah. Dadka badankood, oo ay ku jiraan millennials doorbidaan sheekooyin gaagaaban oo soo jiidasho leh oo ku qasbaya inay wada akhriyaan gabalka oo dhan. Haddii aadan awoodin inaad abuurto nuxurka qoraalka hal-abuurka ah ee aad u baahan tahay inaad ku soo jiito oo aad ku madadaaliso dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato, markaa waxaad ka fiirsan kartaa inaad raadiso qoraayo madax-bannaan oo ka hawlgala goobaha sida Dhallinta ama qorayaasha ka kireystaan ​​adeegyada sida Qoraallada 'EssayTigers'.
Shaandhooyinka, memes. boomerangs, stickers, clickbait, iyo ciyaaraha mobilada dhamaantood waxay noqdeen habab wax ku ool ah oo lagu bartilmaameedsado dhagaystayaasha ka caaggan farsamooyinka suuqgeynta caadiga ah. Noocyadan dheeraadka ah ee madadaalada waxay ku xisaabtamaan malaayiin jecel iyo wadaag kuwaas oo si xeeladeysan kor ugu qaadaya wax soo saarkaaga adigoon ku qasbin macaamiisha mustaqbalka cunaha.
Si kastaba ha noqotee waxaad go'aansatay inaad ku madadaasho saldhiggaaga macaamiisha kumanaan sano iyada oo loo marayo istiraatiijiyadda suuqgeynta, kaliya hubi inaad raacdo tilmaamahan fudud:
Ka dhig mid la jeclaan karo!
Ka dhig mid la wadaagi karo!
Ka dhig wax lagu qoslo!
Ka dhig mid ku habboon!
Ka dhig mid asal ah!
Ka dhig mid la isku halleyn karo!
Waxbarista kun-sanadood ee faa'iidooyinka badeecaddu waa qaybta ugu dambeysa ee laga fiirsado marka la horumarinayo istaraatiijiyad suuq-geyn wax ku ool ah oo loogu talagalay millennials-ka. Inbadan oo kun sano ah ayaa ka ogaanaya shirkaddaada iyo wax soo saarkaaga - laga soo bilaabo sida loo abuuray illaa halka faa'iidadu u socoto - waxay u badan tahay inay go'aan ka gaaraan inay kaa iibsadaan.
Tixgeli sameynta istiraatiijiyad suuqgeyn ah, marka lagu daro yoolalkaaga kale, wax ka baro bartilmaameedkaaga kun-sano jirka ah ee ku saabsan faa'iidooyinka ilaalinta deegaanka, xuquuqul insaanka, ama shaqooyinka sadaqada ah ee macaashka ka soo baxa badeecadu si toos ah ugu socdo dhanka caawinta. Qaabkaas, millennials-ku waxay dareemaan awoodda iibkooda iyagoo aan dambi ka aheyn isticmaalkooda.
Shirkadda dharka ee Patagonia ayaa dhowaan ku deeqday faa'iidooyinka maalinta oo dhan ee iibkooda Jimcaha Madow sadaqaysi. Iibintooda waxay soo martay saqafka, istiraatiijiyaddooda suuqgeyntuna waxay si aad ah ugu tiirsanayd millennials-ka ku xirmaya sababta iyo la wadaagga macluumaadka asxaabta iyo kuwa raacsan.
Xitaa ALS Ice Bucket Challenge wuxuu ahaa mid duurjoog ah olole suuqgeyn guul leh waxbarashadan isku dhafan oo leh tabarucaad sadaqo ah oo ku dheehan madadaalo iyo xiiso leh taasi oo sahlaysay abuuristeeda isla markaana fursad siisay sumcad internet. Ugu dambeyntiina, ururku wuxuu ururiyay lacag ka badan $ 115M oo tabarucaad ah.
Shirkadaha kale waxay raaceen taatiko la mid ah suuq geynta iyo xayeysiinta iyaga oo ka dhigaya millennials ka warqabka shaqadooda samafalka ah, iyagoo la jaan qaadaya ololeyaal suuq geyn horumar leh oo loogu tala galay dadka isku jinsiga ah iyo labada jinsi, iyo xitaa kor u qaadida siyaasadooda iyo dhaqankooda shaqaalaynta si ay macaamiisha ugu ogaadaan mushaharka tartamada iyo nolosha iyo dheefaha la siiyay dhamaan shaqaalahooda.
Ku darista waxbarashada istiraatiijiyad suuqgeyntaada ayaa ah muhiim u ah gaaritaanka millennials. Inta badan ee aad awoodid inaad kuxirato dhinacyada kala duwan ee badeecada ama shirkad, way fududahay inaad abuurto daacadnimo muddo dheer ah iyo si joogto ah waxsoosaarka suuqgaynta iyaga wax ku ool ah.
Sidaad Ugu Shaqayn Karto!
In kasta oo la dejinayo khariidadda loo maro ololaha suuqgeynta guuleysta ee bartilmaameedsanaya millenniyadu waa sahlan tahay, geeddi-socodka si dhab ah loo dhammaystirayo wuxuu u baahan doonaa shaqo badan maadaama badeecad kasta, summad kasta, iyo shirkaddu ay ka duwan yihiin.
Ku billow inaad baarto istaraatiijiyado suuqgeyn guul leh (iyo xitaa guuldareystay) oo ay isticmaaleen shirkado kale. Wax ka baro sida ay u sameeyeen, qalabka ay adeegsadeen, iyo sida ay u awoodaan ku mashquul, madadaalo, oo wax baro macaamiishooda macaamiil kun sano.
Xaaladda ugu xun, kireysato hal kun ama laba sano si ay kuu siiso kaliya aragtida aad u baahan tahay waxa ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee la raadsado kadib markii uu doonayo oo uusan rabin.
Tags: filtarradaxusuus boomerangsasalkastickers
Stacey Wonder waa suuqyahan khibrad u leh arrimaha ganacsiga iyo qoraa madaxbanaan. Stacey waxay abuurtay xayeysiisyo qoraalo ah oo loogu talagalay mawduucyada la xiriira waxbarashada, horumarka nafta, xirfadda, iyo suuqgeynta. Stacey had iyo jeer waxay isku daydaa inay horumariso xirfadaheeda xirfadeed lana wadaagto hababka ugu fiican dadka kale. Marka aysan ku mashquulin mashaariicdeeda, Stacey waxay qortaa sheekooyin gaagaaban oo gaagaaban.